TZXDuino: An Arduino Bhodhi muKaseti yeZX Spectrum Software | Mahara emahara
TZXDuino: bhodhi reArduino mukaseti yeZX Spectrum software
Kune akawanda Retro komputa ine rudo vashandisi. Vechokwadi vateresi vanokwanisa kutenga kana kudzoreredza zvishandiso zvekare. Kushushikana nezveZilog Z80 machipisi, iyo Apple Classic, kana iyo mimwe michina yengano yaive munguva yakapfuura, senge ZX Spectrum, kana iyo Amstrad, Atari, Commodore, nezvimwe zvakawanda. Zvakanaka, vese zvavo vanofanirwa kuziva nezve chirongwa cheTZXDuino chatichataura nezvacho muchinyorwa chino.
Mune zvimwe zvinongedzo isu takaratidza zvinyorwa zvekutora zvekare mitambo yemavhidhiyo uye kumhanya navo mukati ivo emulators. Ino nguva isu tichataura nezve izvo zviri izvo TZXDuino, chii chine chekuita neSpectrum uye neArduino, nezvimwe.
2 Chii chinonzi TZXDuino?
2.1 Kuti ugadzire yako TZXDuino iwe yaunoda
Iyo british firm Sinclair Tsvagiridzo yakagadzira imwe yemakomputa anozivikanwa uye izvo zvinoshamisa kune vanoda retro. Iyo ZX Spectrum yaizoenda pamusika musi waApril 23, 1982.
Iyo 8-bit komputa inoenderana neanozivikanwa microprocessors Zilog Z80A. Uye zvakare, ichave imwe yeanonyanyo kufarirwa macomputer emumba muEurope panguva ino.
Chishandiso chakakwenenzverwa uye chakaringana kwenguva iyo ingafadze iyo komputa nemavhidhiyo mutambo mafeni chegumi ichi, uye icho chichiri chidimbu chemu museum nhasi. Muchokwadi, avo vasina rombo rakaringana kuve neyekutanga Hardware, vanogutsikana nema clones kana emulators kuti varambe vachimutsidzira yavo software.
YeZX Spectrum paizove nemhando dzinoverengeka, kuwedzera kune mamwe clones uye zvigadzirwa izvo zvakabuda zvichipa budiriro yechigadzirwa ichi icho chaive nematanho anoverengeka anoshanda anoshanda.
Kana ari yepakutanga Hardware, hunhu hwaive hwakanyanya kutaridzika panguva yacho:
CPU: Zilog Z80A pa3.5 Mhz uye 8-bit yedhata rayo rebhazi uye 16-bit yebhazi rekero, ichikwanisa kubata zvimwe ndangariro.
Memory- Unogona kusarudza pakati pemaitiro maviri akasiyana e RAM. Iyo isingadhuri 16 kB vhezheni uye inodhura 48 kB vhezheni. Izvo zvaifanira kuwedzerwa kune 16 kB yeROM iyo yaisanganisira sehwaro. Iyo ROM yaisanganisira BASIC muturikiri.
Yekhibhodi: rabha yakabatanidzwa mukomputa mune dzimwe shanduro.
Self Storage: Magnetic cassette tepi system yakafanana neiya inoshandiswa mune yakajairwa odhiyo system. Iyo data inogona kuwanikwa nekumhanyisa kwe1500 bit / s paavhareji. Naizvozvo, mutambo wevhidhiyo ungangoita 48 kB wakatora ingangoita 4 min kurodha. Kunyangwe mimwe mitambo yaishandisa turbo modhi kuti iwedzere kumhanya. Uye zvakare, gore mushure mekuburitswa kweSpectrum, Sinclair akaburitsa iyo ZX Interface I, iyo yaigona kubatanidza kusvika kune masere tepi anotyaira anonzi ma microdrives nekumhanya kwe8 bit / s.
Graphics: yayo giraidhi system inogona kubata matrix anosvika pa256 × 192 px. Kunyangwe iyo resolution yemavara yaingova 32 × 24 chete, iine 8 × 8 pixel masumbu uye ruzivo rwemavara kana hunhu senge rwemberi ruvara, ingi ruvara, kupenya uye kupenya.
Ehezve, akati wandei peripherals kuwedzera pakombuta iyi. Kwete chete iyo ZX Microdrive, asi zvakare mamwe madhisiki maficha akadai seBeta Disk, DISCiPLE, OPUS Discovery, styluses, mbeva (Kempston Mouse, Star Mouse, AMX Mouse, ...), maprinta, vatambi vemitambo yevhidhiyo senge joystick, nezvimwe.
Muna 1986, Sinclair Research yaizotengesa chimbo chayo uye zvigadzirwa kuAmstrad, imwe yezvakaitika kare. Asi, kana iwe usina kuziva, Sinclair Research Ltd. ichiripo sekambani nhasi ...
Uye zvese izvi zvekurota kwemuoni anonzi Sir Clive Sinclair, muLondon-based inventor, mainjiniya uye muzvinabhizinesi aive nepfungwa iyi yakanaka yekutengesa ma microcomputer epamba. Uye chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kuenderera uchinakidzwa navo nemapurojekiti senge TZXDuino iyo yandinokuratidza pazasi
Chii chinonzi TZXDuino?
Ichokwadi kuti iwe une emulators zvaunogona, pamwe nekutenga kana kudzoreredza yekutanga Spectrum michina iwe yaunowana mune yechipiri-ruoko musika iwe pachako. Nenzira iyoyo, iwe unenge uine iyo Hardware yekukwanisa kumhanya retro mitambo yemavhidhiyo uye software sepakutanga. Asi havazi vese vanogona kuwana imwe, uye ndipo panowanikwa TZXDuino inotora kukosha kwayo.
Zvakanaka, fungidzira yakavharwa yakafanana nekaseti tepi, iine bhodhi rekuvandudza mukati uye inokwanisa kumhanyisa yekutanga ZX Spectrum software yawakachengeta pane microSD kadhi. Izvi ndizvo chaizvo zvaungave uine TZXDuino. Icho hachina chekutanga Hardware, asi chimwe chinhu chinhu kana iwe usingade emulators ...
Ivo vane basa rechirongwa ichi ndivo Andrew Beer naDunan Edwards, iyo neramangwana uye fungidziro yakwanisa kuisa zvese mukati mekaseti tepi. Saka iwe unogona kuve uine mumaoko ako diki diki yekumutsa ese iwo engano zvirongwa zveiyo 80-90 yeSpectrum.
Kana iwe uchinetseka nezve hunyanzvi ruzivo rwekuti rwakagadzirwa sei, chokwadi ndechekuti ivo vange vari zvichibva arduino. Saka izita rayo. Uye kana iwe uchida imwe uye iwe uine mweya wemuiti, unogona gadzira yako wega Kaseti yekodhi. Mune ino link iwe unowana iyo PDF iyo iine mirairo yese yeungano yezvinhu zvemagetsi. Uye chokwadi ndechekuti haisi yakaoma zvikuru uye yakareba maitiro ...
Chinhu chega chakaomarara chainacho ndechekuti inoda hunyanzvi hwekubatanidza zvese zviri mukati uye kuva nezvakanaka tini huni hunyanzvi.
Chero nzira, ndine chokwadi iwe unodzidza zvakawanda panguva yekuita kuvaka uye kunakidzwa kana uchinge waunganidzwa uchavimbiswa ...
Kuti ugadzire yako TZXDuino iwe yaunoda
Unogona tenga zvese zvikamu nyore muzvitoro zvine hunyanzvi kana paAmazon, senge:
MicroSD kadhi muverengi module
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » TZXDuino: bhodhi reArduino mukaseti yeZX Spectrum software
Magetsi mota: zvese zvaunoda kuti uzive
ASUS Tinker Bhodhi: zvese zvaunoda kuti uzive